सयपत्री हाइड्रोपावरको आईपीओ स्थानीयमा आजदेखि, कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ? | आर्थिक अभियान
सयपत्री हाइड्रोपावरको आईपीओ स्थानीयमा आजदेखि, कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ?
असार २, काठमाडौं । सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि (असार २ गते)देखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यका ३ लाख कित्ता आईपीओ स्थानीयका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । यो आईपीओ खरीदका लागि आयोजना प्रभावित क्षेत्र बाग्लुङ्ग जिल्ला ताराखोला गाउँपालिका र गल्कोट नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
छिटोमा असार १६ गतेसम्म विक्रीमा रहने यो आईपीओ सो अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेमा ढिलोमा असार ३१ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । आईपीओ खरीदका लागि प्रभु बैंकको ताराखोला र गल्कोट शाखा, ग्लोबल आइएमई बैंकको गल्कोट शाखा, कामना सेवा विकास बैंकको गल्कोट शाखा र एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, काठमाडौंबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै सि–आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३० हजार कित्तासम्म माग गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीको आईपीओाई केयर रेटिङ नेपालले ‘केयर एनपी डबल बी’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको संकेत गर्छ ।
आईपीओ निष्कासनको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :